Fifandraisan-davitra Station Anundgård nametraka – Rehefa manao jery todika ny taonjato lasa | Holmbygden.se
Fifandraisan-davitra Station Anundgård nametraka – Rehefa manao jery todika ny taonjato lasa
Posted on 16 Febroary, 2017 ny Holmbygden.se
Anund Manor efa misy telefaonina fifanakalozana
Fifandraisan-davitra Station Anundgård izao dia manana "tsara indrindra alohan'ny daty". Anisan'ny phasing ny varahina Network manerana ny firenena dia izao nanapa-kevitra ny handray Telia stationen ur drift efter 100 år i aktiv tjänst. Ny fanakatonana vokany eo mpanjifa rehetra izay manana an-trano amin'ny alalan'ny antso an-tariby telephony famandrihana Jack, na Telia na mpandraharaha iray hafa.
taona 2012 dia nanambara fa te Telia mametraka ny telefaonina tobin'ny in Loviken. Izao no fifandraisan-davitra Anundgård gara aho izay dia nahita ny tsara indrindra andro. Araka ny safidy hafa ho an'ny fifandraisana noho ny amin'ny alalan'ny tambajotra varahina ny taloha dia naka ny hafa-ary aoka izany no hahatanterahanareo-bebe kokoa ny Telia Group nandritra ny taona maro izao ao amin'ny dingan'ny nasiana mpiambina taloha rehetra telefaonina fifanakalozana izay heverina intsony mahasoa. Anundgård ny gara dia mikatona ho amin'ny tsara 2018-04-03.
safidy vaovao, anisan'izany Holm Fibre
Ho an'ireo izay manana an-trano amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny telefaonina ny tambajotra varahina izay tianao foana no safidy isan-karazany. Raha handeha mahazo fibre nametraka alalan'ny "Fibre Holm" (Obs! Report eto!) dia azonao ampiasaina avy ao misy mpandraharaha dia ny hisafidy ny Servanet (izay hanao ny fibre harato niaraka tamin'ny Holm Fibre).
An an-trano hafa mba manana telephony ny fibre, azy amin'ny “an-trano telephony alalan'ny tambajotra finday”. Ao amin'ny vohikalany, Telia tanana allmän information med frågor och svar Reference fanakatonana ("Future Networks") ary sina egna erbjudanden raha manapa-kevitra ny hijanona (na sonia) Telia.
raha tsy izany, Telekområdgivarna ny mitondra-tsy miandany mpanjifa izay afaka manampy ny manatsara avy ary ny zavatra izay tokony hihevitra eo anatrehanao hividianana famandrihana.
Anund Farm an-telefaonina voalohany fifanakalozana tao io trano io, izay nandritra ny taona maro ihany koa ny raharaham-barotra mitoetra.
Ny tantaran 'ny telefaonina aho fifanakalozana Anundgård
Ny voalohany boky fampianarana an-telefaonina aho fifanakalozana Anundgård naorina tamin'ny faramparan'ny 1910s. Ny gara avy eo i 50m tany atsinanan'i ankehitriny telefaonina fifanakalozana (hita 700m atsinanan'i ny fiangonana). Stationsbeteckningen tamin'izany fotoana izany dia "Östbyn", Raikitra ihany koa ny toerana ambany no Anundgård. Ny "fiovana boky fampianarana" no nanome ny tena ny Holm ny mpanompo, Maria "Maja" Hjerpe (Teraka Viklund, 1912).
manodidina 1920 Rehefa telephony Holm teo amin'ny fahazazany, izany, dia ny ray nitaiza Maja Pelle Haglund izay nanao jiro, fa efa 13 taona izy, dia i Maia izay tsy maintsy haka ny nihazakazaka. Izy nikarakara ny fitaovana boky fiovana eo amin'ny Holm hatramin'ny voalohany mandeha ho azy sy ny toerana an-telefaonina maoderina kokoa saim-petsy dial naka noho ny asa Holm, eo afovoan'ny ny 60 taona.
Fanoharana momba ny fifanakalozana toerana 40 St nijery mpanjifa amin'izao fotoana izao. Mitovy ny Manor, Anund nijery fitaovana voalohany.
Talohan'ny automatique niasa izany ka rehefa te hiantso na aiza na aiza no voalohany nanomboka cranking ny telefaonina sy hanandratra ny handset. Koa satria hoy Maja "Anundgård" ny teo farany ary avy eo dia tsy maintsy mangataka mba ho mifandray amin'ny. Mety ho mety ihany koa fa hitranga hihaino fosafosa tsindraindray eo an-tanàna amin'ny alalan'ny asa ity.
sary t.v. nahita ny iray amin'ireo asa Maja fifanekena mandritra ny taona maro, "Fifanarahana momba ny fitantanana ny fifanakalozana gara ny antso fitaovana ho an'ny daholobe sy ny telegrama fanafihana" avy amin'ny 1935. Misy, ankoatra ny zavatra hafa amin'ny gara fa misokatra ho söckendagar (andavanandro) amin'ny 8-20. Ivelan'ny ora ireo tsy maintsy mitady fomba hafa-pifandraisana raha te hahazo mihazona ny olona iray. Tamin'ny alahady, ny toerana nakatona ny maraina fanompoana amin'ny 10-13 ary ny Alahady sakafo hariva amin'ny 16-18. Ankoatra izany, ny sary etsy ambany dia afaka mahita fa ny karama ho an'ny asa ho toy ny mpitantana ny fifandraisan-davitra gara dia 40 SEK / taona sy ny famandrihana. Ary araka ny "telefaonina", araka ny isan'ny mpanjifa ao 1935 toy ny 15 St, izay ho isam-bolana ny karama zara raha 50 Kr.
(Tsindrio ny sary mba malalaka)
Ho an'ireo izay tsy manana telefaonina ao an-trano izany dia mba lasa mitsidika ny biraon'ny ara raha te telefaonina. Teny an-dalana avy tsy maintsy mandoa vola amin'ny alalan'ny miala 15 denaria ao amin'ny mainty basy araka ny hita eo amin'ny sary etsy ambany. Ny sary ihany koa hita ny boky momba ny gara Soeda dia mirakitra Amaritana ny Datin'ireo taona 1919. pejy 120 ahitana ilay "Östbyn".
Maja nonina tao an-telefaonina voalohany ny fiainana birao. Tamin'ny faran'ny taonjato faha-40 ny nanorina ny boky vaovao switchboard 100m east. Amin'izao fotoana izao dia ny zanany vavy, izay mipetraka any amin'ny toby tranainy indrindra fifandraisan-davitra, raha mbola velona ny zanany lahy ao amin'ny faharoa-tranainy indrindra.
Anund Manor foibe ara faharoa. Ao ambadiky ny varavarankely ho amin'ny ankavanana, dia ny boky fampianarana fitaovana, ny efitrano sisa izany, dia afaka miantso, raha manana finday manokana ao an-trano
Tamin'ny tapaky ny 60 no naorina voalohany Holm mandeha ho azy an-telefaonina fifanakalozana (Ny trano misy intsony), tamin'ity indray mitoraka ity eo anelanelan'ny roa voalaza etsy ambony. Teo am-piandohan'ireo 80 ny naorina tao amin'ny fifandraisan-davitra ampiasaina mandra-toerana amin'izao fotoana izao. Tamin'ny tapaky ny volana / tara 90 ny, ela be talohan'ny YouTube, Facebook sy Google nahita ny mazava, izany ny alalan 'ny telefaonina toerana satria maro ny voalohany Holmbor nanana fifandraisana amin'ny Internet.
Matetika indrindra nanana ny biraonao solosaina iray nanao “56 kbits-modem” izay kosa dia mifandray amin'ny finday Jack. Ary ny fahasoavana izay dia naka ny finday raha mipetraka sy miandry ny dimy minitra ho an'ny pejy Web azo mavesatra entana ny! Mety nandalo ny voalohany e-mail Anund foibe ara Farm?
Indrisy anefa for Holm mponina, dia tsy nahazo ny gara mba ho upgraded amin'ny haingana be ADSL-tekniken Nanomboka tany am-piandohan'ny 00 ny, raha tsy Telia na mpandraharaha hafa nihevitra izany mahasoa. fararano 2005 dia fahamaiton'ny taretra rongony, avy tsary mba Anundgård-tsekoly ary avy eo dia nanontany Anundgårdsbor koa raha toa izy ireo liana amin'ny fidirana, izay tokony ho 15 tokantrano no. Taona vitsivitsy tatỳ aoriana, dia ny finday 3G teknolojia, izay midika fa ny ankamaroan'ny olona nandao ny antitra miantso-up fifandraisana aterineto amin'ny alalan'ny finday Jack.
rehefa afaka efa ho 40 taona ny asa fanompoana dia Anund Farm telefaonina vao haingana gara ho nanala toeram-pisavana
Mety ho taona maro amin'izao fotoana izao satria misy farany surfed tamin'ny "56 kbits Modem" amin'ny alalan'ny antso an-tariby Jack, kosa ao amin'ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mbola manodidina 40 mpanjifa mampiasa ny telefaonina an-trano Jack ho telephony amin'ny Anundgård-peo.
fanapahan-kevitra tamin'ny Desambra 2016: Marina fa fanampiana ny fibre ny Holm! Holmbygden.se
Holm Fibre Economic Association. Sign up eto!
Read more about ny fanakatonana / "ho avy tambajotra". Telia.se
4G-tompony till Holmbygden! Holmbygden.se
Fiovana in fifandraisan-davitra- sy ny tambajotra haingam-pandeha, Post & Telecom Agency
Esory Telia raikitra telephony in Loviken 2012, Holmbygden.se